तपाईको सास कहिलेकाही अचानक रोकिए के गर्ने ? सीपीआर भनेको के हो ? जानी राखौ
तपाईको सास कहिलेकाही अचानक रोकिए के गर्ने ? सीपीआर भनेको के हो ?
डिसेम्बर 26, 2019 डिसेम्बर 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments कार्डियो पल्मोनरी रिससिटैश, सीपीआर
सीपीआरलाई अंग्रेजीमा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटैशन (Cardio Pulmonary Resuscitation) भन्दछन् । कहिलेकाही सास रोकिएर मानिसको ज्यान जाने खतरा हुन सक्छ त्यस्तो आपतकालिन अवस्थामा गरिने उपचारलाई छोटो शब्दमा सीपीआर भन्दछन् ।
यस्तो अवस्थामा तालिम प्राप्त ब्यक्तिले यो उपचार गर्न सक्दछ । यस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभावमा ३० पटकसम्म छातीमा दबाब दिनाले ब्लडको दौर मस्तिष्कमा पुगी पुन फर्कने हुन्छ । यसरी गर्दा पनि नभए मुखमा मुख जोडेर सास दिनाले यस्ता व्यक्तिलाई पनि पुनर्जीवन दिन या बचाउन सकिन्छ ।
सीपीआर हार्ट अटेक, कार्डियक अरेस्ट, पानीमा डुब्दा वा सास बन्द हुदा वा करेन्ट लागेर बेहोस हुदा गरिने उपचारलाई भन्दछन् । यस्तो उपचार अनुभव प्राप्त ब्यक्तिले तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभावमा गर्न सक्नेछन् । यस्ता बिरामी हस्पिटल लग्दा मृत घोषित गर्न सक्ने छन् ।
सीपीआरमा बेहोस भएको व्यक्तिलाई मुखमा मुख जोडेर सास दिने र छातीमा दबाब दिने गरेको हुन्छ । यसरी सास दिदा बेहोस व्यक्तिको फोक्सोमा अक्सिजन पुग्न थाल्दछ । यसरी दबाब दिदा धडकन सामान्य नहुदासम्म दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । तर धड्कन सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेपछि भने यस्तो उपचारको कुनै आवश्यक छैन ।
यस्तो समस्या कुनै पनि बेला हुन सक्ने भएकाले यस्तो तालिम हरेकले लिनुपर्ने देखिएको छ । यो तालिम स्वास्थ्य समस्थामा लिन सकिन्छ । यस्तो तालिम आम नागरिकलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो तालिम प्राप्त व्यक्तिले असमयमा हुने मृत्युलाई रोक्न सक्छ ।
एक अध्ययनले यो कुरा थाहा हुन आएको छ कि यदि यस्तो तालिम सबैलाई दिन सकिन्छ भने असमयमा हुने मृत्युलाई रोक्न सकिनेछ । घटना हुनासाथ यो उपचार दिनुपर्ने हुन्छ । तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभावमा बेहोस व्यक्तिको ज्यान जान सक्ने देखिएको छ ।
← यस्ता छन् क्यान्सर हुने प्रमुख कारणहरु
आज खण्डग्रास सुर्यग्रहण लाग्दैछ, ग्रहण लाग्दा के गर्नुहुँदैन ? →